ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးလေးတှရေဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ စိတျနစေိတျထားမြား – Focus Myanmar
Home > ဗေဒင်
ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးလေးတှရေဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ စိတျနစေိတျထားမြား
လူတှမှော သူနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးနဲ့အကငျြ့တှေ ရှိတတျပါတယျ။ မှေးနေ့မှေးနံကို လိုကျပွီး လူတဈယောကျအကွောငျးကို သိရတာမြိုးလညျး ယုံကွညျမှုတှအေရ ရှိပါတယျ။ သငျရဲ့ မှေးဖှားတဲ့ ရကျကို လိုကျပွီး သငျ့ရဲ့ ယဘေုယြ အကငျြ့ကိုလညျး သိရတာမြိုး ရှိပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့မှာ မှေးဖှားတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျတော့ သငျ့မှာ အခုလို သဘောသဘာဝလေးတှေ ရှိနနေိုငျပါတယျ။
သူတို့လေးတှကေ တဈခုခုဆိုရငျ အသေးစိတျ သိခငျြတဲ့ သဘောသဘာဝရှိပါတယျ။ ပဟဠေိတှေ ဖွရှေငျးရတာ သဘောကသြလို၊ လြှို့ဝှကျ စုံစမျးရတဲ့အရာတှမြေိုးတှေ၊ ရတနာမွပေုံရှာတာမြိုးတှအေပွငျ အကွောငျးအရာတဈခုခုကို စူးစမျးလေ့လာရတာမြိုးတှကေို သဘောကတြတျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျအရာတှကေို သဘောကတြတျကွပါတယျ။
ခရီးထှကျရတာကို ကွိုကျနှဈသကျသူတှေ ဖွဈပွီး Adventure trip ပုံစံမြိုးတှကေို ပို သဘောကတြတျပါတယျ။ နရောသဈတှကေို သှားရတာ သဘောကပြွီး ကြောပိုးအိတျတဈလုံးလှယျပွီး ခရီးတှေ ပတျသှားခငျြတဲ့သူတှလေညျး ဖွဈကွပါတယျ။ စှနျ့စှနျ့စားစား လုပျရတဲ့အလုပျတှကေို ကွိုးစားကွညျ့ခငျြစိတျတှေ ရှိတတျပါတယျ။
ဘယျအရာကိုမဆို မှတျမိလှယျပွီး ဉာဏျကောငျးကွပါတယျ။ ဉာဏျနီဉာဏျနကျ ဆငျခွဆေငျလကျ ကောငျးကောငျး ထုတျတတျသူတှေ ဖွဈပွီး ဖွတျထိုးဉာဏျလညျး ကောငျးကွပါတယျ။ ခေါငျးသုံးပွီး ဖွရှေငျးရမယျ့ကိစ်စတှဆေိုရငျ သူတို့လေးတှကေ အားကိုးရပါတယျ။
တဈခုခုကို သငျယူလေ့လာတဲ့အခါ တတျလှယျကွပါတယျ။ သူတို့ လုံးဝ စိတျမဝငျစားတဲ့ အပိုငျးတှကေို ဘယျလိုသငျပေးပေး ထုံပပေနေဲ့ တတျမလာပမေယျ့ သူတို့သာ စိတျဝငျစားလိုကျရငျ သငျယူမှု အရမျးမွနျတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့က ရှညျရှညျဝေးဝေး ရှငျးပွစရာ လိုတဲ့သူတှေ မဟုတျပမေဲ့ အသေးစိတျဆနျဆနျ မေးမွနျးပွီး သငျယူကွသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အသိသာဆုံး အခကျြကတော့ ဒေါသကွီးတာပါပဲ။ ဗုဒ်ဓဟူးတှေ ဒေါသကွီးပွီဆိုရငျ လူစိတျပြောကျလောကျတဲ့အထိ ဒေါသကွီးတတျကွပါတယျ။ မိုကျရိုငျးသှားတာမြိုးမဟုတျပမေဲ့ ဒေါသကွီးတဲ့အခါမှာတော့ စကားတှကေတော့ တဈဖကျလူ နားမခံသာအောငျ ပွောတတျကွပါတယျ။ အမှတျသညျးခွကေလညျး ကွီးတတျကွပါသေးတယျ။
ဗုဒ်ဓဟူးတှကေ သဘောကောငျးရငျလညျး တကယျကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့အပျေါ မကောငျးတာ တဈခွားသူ တဈယောကျအပျေါ မကောငျးတာ အနိုငျကငျြ့တာမြိုးကို သညျးမခံနိုငျကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ မဟုတျမခံစိတျရှိပွီး ကိုယျ့ဘကျက မှနျနရေငျ ဘယျလိုလူကိုမဆို ပွနျတုံ့ပွနျရဲတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ
နောကျဆုံးကတော့ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးတိုငျးက ခဈြဖို့ကောငျးကွတာပဲနျော….:3
လူတွေမှာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အကျင့်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မွေးနံကို လိုက်ပြီး လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သိရတာမျိုးလည်း ယုံကြည်မှုတွေအရ ရှိပါတယ်။ သင်ရဲ့ မွေးဖွားတဲ့ ရက်ကို လိုက်ပြီး သင့်ရဲ့ ယေဘုယျ အကျင့်ကိုလည်း သိရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာ အခုလို သဘောသဘာဝလေးတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သူတို့လေးတွေက တစ်ခုခုဆိုရင် အသေးစိတ် သိချင်တဲ့ သဘောသဘာဝရှိပါတယ်။ ပဟေဠိတွေ ဖြေရှင်းရတာ သဘောကျသလို၊ လျှို့ဝှက် စုံစမ်းရတဲ့အရာတွေမျိုးတွေ၊ ရတနာမြေပုံရှာတာမျိုးတွေအပြင် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို စူးစမ်းလေ့လာရတာမျိုးတွေကို သဘောကျတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရာတွေကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
ခရီးထွက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်ပြီး Adventure trip ပုံစံမျိုးတွေကို ပို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ နေရာသစ်တွေကို သွားရတာ သဘောကျပြီး ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးလွယ်ပြီး ခရီးတွေ ပတ်သွားချင်တဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို ကြိုးစားကြည့်ချင်စိတ်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာကိုမဆို မှတ်မိလွယ်ပြီး ဉာဏ်ကောင်းကြပါတယ်။ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် ဆင်ခြေဆင်လက် ကောင်းကောင်း ထုတ်တတ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး ဖြတ်ထိုးဉာဏ်လည်း ကောင်းကြပါတယ်။ ခေါင်းသုံးပြီး ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင် သူတို့လေးတွေက အားကိုးရပါတယ်။
တစ်ခုခုကို သင်ယူလေ့လာတဲ့အခါ တတ်လွယ်ကြပါတယ်။ သူတို့ လုံးဝ စိတ်မဝင်စားတဲ့ အပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုသင်ပေးပေး ထုံပေပေနဲ့ တတ်မလာပေမယ့် သူတို့သာ စိတ်ဝင်စားလိုက်ရင် သင်ယူမှု အရမ်းမြန်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြစရာ လိုတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပေမဲ့ အသေးစိတ်ဆန်ဆန် မေးမြန်းပြီး သင်ယူကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အသိသာဆုံး အချက်ကတော့ ဒေါသကြီးတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဟူးတွေ ဒေါသကြီးပြီဆိုရင် လူစိတ်ပျောက်လောက်တဲ့အထိ ဒေါသကြီးတတ်ကြပါတယ်။ မိုက်ရိုင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ ဒေါသကြီးတဲ့အခါမှာတော့ စကားတွေကတော့ တစ်ဖက်လူ နားမခံသာအောင် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အမှတ်သည်းခြေကလည်း ကြီးတတ်ကြပါသေးတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးတွေက သဘောကောင်းရင်လည်း တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အပေါ် မကောင်းတာ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်အပေါ် မကောင်းတာ အနိုင်ကျင့်တာမျိုးကို သည်းမခံနိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ဘက်က မှန်နေရင် ဘယ်လိုလူကိုမဆို ပြန်တုံ့ပြန်ရဲတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတိုင်းက ချစ်ဖို့ကောင်းကြတာပဲနော်….:3
Credit : အန်တီမေ
တနင်ျလာသမီးလေးတှမှောပဲ တှရေ့တတျတဲ့ စိတျနစေိတျထားမြား
နှလုံးလမျးကွောငျးက ပွောတဲ့ သငျ့အခဈြရေး (အခဈြရေးလက်ခဏာဗဒေငျ)
၂၀၂၀ခုနှဈ ( ၇ )လပိုငျးအတှကျ ခုနှဈရကျသားသမီး တဈလစာဟောစာတမျး
ဗေဒင် / ကြားသိရသမျှ
B သှေးလေးတှေ ရဲ့ စိတျနစေိတျထားလေးတှေ သိခငျြ ရငျ ပုံကိုနှိပျ ပါ
ဗဟုသုတ / ဗေဒင်
အိုးပိုငျ အိမျပိုငျနှငျ့ ဖွဈလာအောငျ
အပငျြးကွီးတဲ့ တနင်ျဂနှေ .. ခဈြစရာကောငျးတဲ့ တနင်ျလာ
လူတိုငျး သိရှိထားသငျ့ တဲ့ ကုသရ နျ ခကျခဲသူမြား အတှကျ အဖုအ ကြိတျ ပြောကျစရေနျ နညျးလမျး
ကု တငျ (၅၀၀) ဆေး ရုံ မီးေ လာငျ မှုမှာ အဲ ကှနျးဖှငျ့ ခဲ့ တဲ့ သူနာပွု ကို အမှု ဖှငျ့